10 the best travel zokusebenza - Izindaba Rule
Akekho lidinga smartphone egcwele zokusebenza okungabazekayo. Sike babanjwa lakhetsiwe amathuluzi best isihambi digital-savvy
Lesi sihloko osesikhundleni “10 the best travel zokusebenza ... ukuthi uzoba ukusenzisa” lalotshwa Will Coldwell, ngoba theguardian.com ngoMgqibelo 2 January 2016 07.00 UTC
Isikhathi eside, lapho ngiya nomaphi sibonwe usebenzisa i-Google Maps ukuze ubaqondise lapho bedabula inethiwekhi izithuthi zomphakathi yaseLondon umngane bukeka dlulile futhi prod: "Oh, musa oyisebenzisayo Citymapper?"Ekugcineni, I wahoxa.
City semephu citymapper.com (iOS)
Comprehensive, Kulula ukusebenzisa futhi ibuye ukudlala, Citymapper unikeza eningiliziwe uhambo Imininingwane lwendzaba kuka Google, kuhlanganise kusukwe real-time nokuphazamiseka kwesimiso nezibonis, kanye Uber ukuhlanganiswa kanye nemizila umjikelezo. Itholakala ezungeza 30 imizi emhlabeni wonke, nazo zonke esobala umuzi-break izindawo embozwe. Lize ekutshela eside kangakanani uhambo lwakho ngeke uthathe by Jetpack - ukwaziswa okungasizi lutho ngempela, kodwa ngethemba okuthile ukuze ujabule uma isitimela yakho ikhanseliwe.
Over 70 abantu abayizigidi ezingu-ubhalise Duolingo, yokufunda lokusebenza ulimi khulula futhi iyizinhlobo eziklanywe kahle. Nakuba engeyena indawo efanele ngolimi yesikole, uhlelo lokusebenza kuyindlela fun ukuze uthole izinto eziyisisekelo, noma uzigcine fresh lolimi nolwazimagama, ngaphambi uhambo phesheya. Just like a umdlalo we-computer, uhlelo lokusebenza uqondisa nawe amazinga udinga ukuqedela ngaphambi eqhubekela phambili, futhi uzuza okuhlangenwe nakho amaphuzu endleleni.
Xe kuyinto go-to site for kwemali kuwebhu, ngakho-ke akumangalisi ukuthi uhlelo yayo ithandwa kakhulu: kanye kuka 20 million okulandwayo kusukela kwethulwa. It has eziningi izici ibhizinisi ngamakhasimende, ezifana amazinga for amatshe ayigugu kanye mlando lwemali amashadi, kodwa isihambi kuba kakhulu ewusizo for iqiniso elisobala ukuthi akwazi ukuguqula zonke lwemali emhlabeni. Iphinde isebenza ngaphandle kwe-intanethi ngokusindisa owokugcina rates olusha, okuyinto enkulu uma uku endaweni nge zokuxhuma limited noma sizama ukuwusindisa on idatha.
A bit like a agent ephaketheni travel, Tripit ukudansela isiginci sakhe ndawonye ukwaziswa ngezokuvakasha kusuka kokuqinisekisa kwakho imeyili izindiza, amahhotela, izimoto eziqashiswayo, imicimbi bezovakasha oguqula ibe uhambo olulodwa. Vele phambili ama-imeyili yakho ukuze lokusebenza futhi uyokwenza bonke abanye. Uma usohambweni nabanye ungakwazi kalula ukwabelana izinhlelo, ukwenza lokhu lokusebenza ewusizo wokuxhumanisa iqembu elithile uhambo lokuya.
Kukhona lakhetsiwe zokusebenza laphaya ukukusiza esehlukanisa izikweletu (Tipulator, Splitwise njll), kodwa Splittr is bazilungiselela yokuhlawula, ukuhlinzeka isiteji elula ukwabelana izindleko phakathi kwabangane. Ungafaka izindleko njengoba uya, kuhlanganise akhokhe lokho kanye lokusebenza uyokwenza bonke abanye. A touch nice isikhathi eside, multi-destination uhambo wukuthi bonke zezimali zisekelwa futhi ungakwazi mix zezimali ngaphandle kokuba ukwenza ukuguqulwa ngokwakho.
Hhayi impela bahlakaniphe ngegama, Nokho Ngokuqinisekile bahlakaniphe ngokwemvelo, App in the Air is a smart, eqondile, flight kokulandela uhlelo lokusebenza ukuthi ine Ukuhlanganisa best of izindiza kanye zezindiza. Kuyoba sinazisa mayelana nesimo sendiza - ngisho noma ungenawo internet ukubikelwa - futhi ikusiza ukuthi uphathe isikhathi sakho esikhumulweni sezindiza, uyayidiliza indiza ngayinye ngezigatshana ezine; Ngena, boarding, ukusuka kanye kokwehla isikhathi. Iphinde luhlanganisa nge Tripit (ngenhla) ukuvumela ukuba ukungenisa wonke izindiza zakho.
Lokhu umhumushi ingaba ithuluzi eliwusizo ukuze usekele siqu sakho, yokufunda ulimi sesisibi, kodwa iqiniso esilaziyo, kuyasiza kakhulu ezingeni esiwusizo ngokushesha ekuhumusheni zosuku nosuku amazwi uhlangabezana ohambweni lwakho. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukubamba ikhamera yakho kuze umbhalo - ezifana isibonakaliso, noma imenyu - Google uyobe ukuhumusha yona kweso. Kuba uhlelo lokusebenza ebalulekile nganoma yisiphi isihambi.
• Free, iOS futhi Android
Lolu hlelo lokusebenza ambitious kwakha iphephabhuku digital yohambo yakho ukuze ukwazi ukubheka emuva uhambo lwakho ibalazwe exhumana. Uhlelo lokusebenza amathrekhi njengoba uya, wokugubha umugqa obomvu kanye ibalazwe umzila esiqondile uthatha; uhlelo lokusebenza futhi uqaphe ijubane lakho kanye kokuwa, okwenza kube olukhulu adventure izihambi, Nokho kungcono njengoba nje kumnandi ukubheka emuva umzila wakho bezungeza umuzi. Ungakwazi ukwengeza izithombe, video, audio nombhalo endleleni, kwakheka idayari multimedia travel ungaba.
Wolfram Ngokushiswa Yilanga
Kunamaphuzu zokusebenza ezimbalwa phandle lapho ezikusiza ukuphatha isikhathi sakho elangeni ngokuphepha, kodwa lena inikeza ukwaziswa okuningiliziwe kakhulu ukuze uhlale unolwazi. Ufaka isikhumba sakho hlobo futhi sinquma isikhathi eside kangakanani ungachitha ethamele ilanga wena ngaphambi kokuba kushiswe, esekelwe isikhathi sosuku, lapho ukhona, futhi amandla ngelanga cream ubhekene egqoke. Liphinde lunikeze izibikezelo-UV indawo yakho.
Lapho usuqedile upheqa Guardian Izikhangibavakashi, kunjalo, uhlelo lokusebenza Time Out kuyinto lwemibhalo olukhulu imibono lwezinto okufanele zenziwe emadolobheni emhlabeni wonke. With Ukuhlanganisa kusukela Accra Amsterdam, Edinburgh ku Singapore, uhlelo lokusebenza ihlanganisa konke kusuka imigoqo, zokudla, ezikhangayo kanye nemicimbi. Owutholile mcimbi Ithuluzi elibe usizo ngokukhethekile, okusho awusoze zikuthola kunzima amakhonsathi ethandwa kakhulu, imikhosi noma eyodwa-off Izenzakalo kwenzekani lapho ukhona. Ungase futhi ukubhuka zokudlela kanye amathikithi ekhonsathi ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza bese udala egcizelele travel guide for holiday yakho.
← The 25 iningi Kulindeleke isiqophi imidlalo 2016 WD-40 futhi tampons microwaved: izimfihlo ukudla izithombe yembula →